म’दि’रामा कठोर बन्यो ओली सरकार, कुनमा कतिले बढ्यो कर ? – Kavrepati
Home / समाचार / म’दि’रामा कठोर बन्यो ओली सरकार, कुनमा कतिले बढ्यो कर ?
admin May 30, 2021	समाचार Leaveacomment 446 Views
काठमाडौं । सरकारले म’दि’रामा अन्तशुल्क बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले म’दि’रामा अन्तशुल्क बढाएका हुन् । उनले जौबाट बनेको म’दि’रामा अन्तशुल्क प्रतिलिटर १९८ रुपैयाँ पुर्याएका छन् । चालु आवमा यो प्रतिलिटर १६५ रुपैयाँ थियो ।
त्यसैगरी स्पार्किङ वाइनमा १२ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको म’दि’रामा प्रतिलिटर ३७० रुपैयाँबाट बढाएर ४४४ रुपैयाँ बनाइएको छ । साथै १२ देखि १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहलमा प्रतिलिटर ३७० रुपैयाँबाट बढाएर अन्तशुल्क ४४४ रुपैयाँ पुर्याएको छ । त्यसैगरी १७ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहलमा ४३० रुपैयाँबाट बढाएर ५१६ रुपैयाँ बनाइएको छ ।
त्यसैगरी छ्याङ (क्न्ट्री बियर)मा प्रतिलिटर ३५ रुपैयाँबाट बढाएर प्रतिलिटर अन्तशुल्क ४३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यसैगरी सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी, साइडरमा प्रतिलिटर ४३० रुपैयाबाट बढाएर ५१६ रुपैयाँ बनाइएको छ । साथै अनडिनेचर्ड इथायल अल्कोहलमा प्रतिलिटर ६० रुपैयाँबाट बढाएर ७० रुपैयाँ बनाइएको छ । आयतनमा ८० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अल्कोहल भएका म’दि’राको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने रेक्टिफाइड स्प्रिटमा प्रतिलिटर
६० रुपैयाँबाट बढाएर ७० रुपैयाँ बनाइएको छ भने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहलमा प्रतिलिटर प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँलाई ७६ रुपैयाँ बनाइएको छ । एन्हाइड्रस इथानोल (९९ प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको)मा प्रतिलिटर ७ रुपैयाँलाई ९ रुपैयाँ बनाइएको छ । साथै डिनेचर्ड स्प्रिट (८० देखि ९९ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको)मा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँलाई बढाएर २० रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
ह्स्किी, भोड्का, जीन र जेनेभा, रम, ब्राण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोगथ हुने मा’दक द्र’वमा प्रतिलिटर १६५ रुपैयाँबाट १९८ रुपैयाँ बनाइएको छ । १५ युपी शक्ति ४८.५ प्रतिशतको अल्कोहल भएको तयारी म’दि’रामा प्रतिलिटर १३२५ रुपैयाँबाट १५९२ रुपैयाँ र प्रति एलपी लिटरमा १५६० रुपैयाँबाट १८७२ रुपैयाँ बनाइएको छ ।
Previous अलिकति ज्वरो आएको छ के गर्ने होला ? भनेर छोरीले फोनमा कुरा गरेकेहि समयपछी ….. (भिडियो)
Next मोटरसाइकल, स्कुटर र यी कारको मुल्य सोच्नै नसक्ने गरि ह्वातै घट्ने : हेर्नुहोस